Mareykanka oo Damacsan Talaabo Lagu xanibayo 12 kamida Bangiyada waaweyn ee China – Saraar Media
Home›All English News›Mareykanka oo Damacsan Talaabo Lagu xanibayo 12 kamida Bangiyada waaweyn ee China
Sharci yaqaano sar-sare oo mareykana ayaa Aqalka cad ee mareykanka soo hor dhigay qorshe lagu xanibayo 12 kamida Bangiyada wadanka Chine, iyagoo u aaneynaya ineuu qorshahani yahay talaabo lagu dardar galinayo cunaqabateyntii dhowaantan madaxweyne Trump saarey Waqooyiga wadanka Kuriya. talaabadan ayaa lafilayaa iney xanibaad weyn saari doonto dhamaan dhamaan hawlaha dhaqdhaqaaq ee dhaqaalaha caalamiga ah ee wadanka Waqooyiga Kuriya,
Hirgalinta hindisahan ayaa ah mid kamida dagaalka lagaga soo horjeedo Barnaamijka Gantaalaha Nukliyeerka ee Waqooyiga Kuriya. qorshaha talaabadan ayaa sidookale sii kordhineysa xiisada ka dhex aloosan labada wadan ee China iyo US,
Hindisaha talaabadan ayaa waxaa Aqalka cad soo hordhigay Gudoomiyaha xadhiidhka ganacsiga arimaha dibada Mareykanka Ed Royce (R-CA), oo isagu katirsan xisbiga Republican ka, islamarkaana hordhiga liiska Magacyada Bangiyada xanibaada lasaarayo ee wadanka China. oo ay kamidyihiin bangiga Ganacsiga, Industrial and Commercial Bank of China iyo bangiyada kale ee China Construction Bank, Agricultural Bank of China, China Merchant Bank, China Minsheng Banking Corporation, Guangdong Development Bank, Hua Xia Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Bank of Communications Co. of China, Bank of Dalian, Bank of Dandong, and Bank of Jinzhou.
dhinaca kale Madaxweyne Trump ayaa isagu qaba in dowlada Pyongyang , ay saameyn weyn ku yeelankarto sidii loo xanibi lahaa barnaamijka Nukliyeerka ee Waqooyiga Kuriya. sidaa darteed ay culey weyn kusaarto Waqooyiga kuriya iney joojiso tayeynta barnaamijkeeda Nukliyeerka.
Xaalada Deegaanka Oramada iyo Dadka Somaliland udhashay ...